အရမျးကောငျးနပွေီ – My Blog
ဒီနအေိ့မျအပွနျလမျးဟာ တျောတျောလေး စိတျပကျြစရာကောငျးနသေညျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျကပဲ လကျရှိတှဲနတေဲ့ ရညျးစားနဲ့ ပွတျတယျ။ ဒီနေ့ အလုပျကနေ လူလြော့ထဲအထဲ ပါသှားတယျ။ ဘယျလောကျ စိတျပကျြဖို့ကောငျးလဲ။ဒါနဲ့ ခပျစောစောပဲပွနျလာခဲ့ရတယျ။ နောကျတဈခု စိတျဖိစီးတာကလညျး ဒီရကျပိုငျးမှ အဒျေါတှနေဲ့ အတူနရောက ပွနျလာတဲ့ သူတူမ ဆုမွတျကွောငျ့ပါ။ ခတျေနောကျပွနျဆှဲတာ မဟုတျပမေယျ့ တူမလေးကို လှတျလပျခှငျ့ တအားမပေးထားဘူး။ သမီးအရငျးလို့ခဈြတာကွောငျ့ သမီးလို့ပဲချေါပွီး ယုယကငျြနာမှုတှပေေးသမြှ စောဒက တကျတာကို အမွဲတမျးခံနရေတယျ။သမီးက ဒါလေးတောငျ မလုပျရဘူးလားသူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျသှားတာ အပွဈလားစသညျဖွငျ့ပေါ့။ ဒီနတေ့ော့ အိမျပွနျရောကျရငျ သူငယျခငျြးတှဆေီ ဖုနျးဆကျလို့ရရငျ အပွငျထှကျ အရကျသောကျမယျ။ မရရငျတော့ အိမျမှာပဲ သောကျမယျလို့ စဉျးစားထားတာ။ အိမျရောကျလို့ သော့ဖှငျ့ပွီး အိမျထဲဝငျ လိုကျတော့ ဘယျလိုမှထငျမှတျမထားတဲ့ မွငျကှငျးက ဆီးကွို နပေါတယျ။ တူမဖွဈသူဟာ အပွာကားကိုကွညျ့ပွီး ဝတျလဈစလဈနဲ့ ဆိုဖာပျေါမှာ ထိုငျနတောကွောငျ့ပါ။
သူ့မရဲ့ ကားထားတဲ့ ပေါငျနှဈဖကျကွားမှာတော့ လိငျတံအတုကိုထညျ့ပွီး အားပါးတရ မှနေတောကို တှလေို့ကျရတော့သညျ။ဆုမွတျဟာ မကျြစိနှဈလုံးကို ပိတျထားပွီး ဖီးလျတှတေကျနပေါတယျ။ ပါးစပျကလညျး။ “အား..အား´´ ဆိုပွီး ညညျးပွောလေး ပွောနပေါသေးတယျ။ကိုမြိုးဝတေယောကျ သူတူမလေးဟာ ဘာ့ကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈနရေလဲ ဆိုတာကို အံသွနမေိပါတော့သညျ။ ဆုမွတျလေးဟာ တခြိနျတညျးမှာပဲ သူ့ရဲ့ကြောကို ဆိုဖာပျေါမှီခပြွီး တငျပါးလုံးလုံးလေးကို ကော့ကော့ပေးနပေါတယျ။ ပွီးတော့ သူ့ရဲ့နို့လေးတှကေို သူလကျနဲ့ ပှတျသပျနတော တှလေို့ကျရသညျ။ “အား….ကောငျးလိုကျတာ…´လို့ပွောပွီး သူ့မကျြလုံးကိုအဖှငျ့မှာတော့ ဒေါသတကွီးနဲ့ ရပျကွညျ့နတေဲ့ သူ့ကို မွငျလိုကျရပါတော့တယျ။ ဆုမွတျတယောကျ ဘာလုပျလို့ ဘာကိုငျရမှနျးမသိ ဖွဈသှားပွီး သူ့ရဲ့ရငျသားလေးတှကေို လကျကလေးနဲ့ အုပျထားလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖီးလျတကျနခွေငျးနဲ့အတူ ရှကျရှံ့ဝမျးနညျးခွငျးကို တပွိုငျတညျး ခံစားနရေတဲ့ပုံပါပဲ။ ကွညျ့နတေဲ့ သူကို ကွညျ့ရငျး ဆုမွတျတယောကျ ငိုခလြိုကျမိပါတော့တယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ဖွဈလာတဲ့လိငျစိတျကထိနျးမရနိုငျတော့ဘဲနဲ့ ပွီးလုပွီးခငျ ဖွဈလာပါပွီ။ နောကျဆုံးမှာတော့ဦးလေးတယောကျလုံး ကွညျ့နပေမေယျ့ဆုမွတျတယောကျအကောငျးကွီးကောငျးပွီး တညညျးတညူဖွဈနပေါတယျ။ ဆုမွတျဘာပွောလို့ ပွောရမှနျးမသိတော့ပါ။ ပွီးလုပွီးခငျအနအေထားမှာ မပွီးလိုကျတာရော..ဘာပွောလို့ ပွောရမှနျးမသိတာရောပေါငျးပွီးငူငူကွီးသာထိုငျနမေိတော့သညျ။ နောကျတော့မှာ သူ့အိပျခနျးထဲကို အပွေးကလေးထှကျသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူအခနျးထဲကို မရောကျလိုကျပါ…။ သူ့အဖကေ လကျကိုဖမျးဆှဲပွီး ပွနျထိုငျခိုငျးလိုကျပါတယျ။ “ဟငျ..ငါသမီး တျောတျောအလိုးခံခငျြနတေယျ ဟုတျလား..ဒီစကားတှေ ဘယျကနဘေယျလို ထှကျသှားလညျး ကိုမြိုးဝေ မသိလိုကျပါ။ ပွောထှကျမိတာကိုလညျး အံ့သွနမေိတယျ။ ဆုမွတျတယောကျ တျောတျောလေး အံ့အားသငျ့သှားရပါတယျ။အမွဲတမျး ငွငျငွငျသာသာ ပွောတတျတဲ့၊ သူ့ကို အလှနျကွငျနာတဲ့ သူ့ဦးလေး ပါးစပျက အဲလို စကားမြိုး ထှကျလာလိမျ့မယျလို့ ဘယျတုနျးကမှ ထငျမထားခဲ့မိပါဘူး။ သူ သတိဝငျလာပွီးသမီးတောငျးပနျပါတယျ ဦးရဲ့။
အခုလညျး ဘယျကနဘေယျလို ဖွဈသှားမှနျး မသိလိုကျတာပါလို့ ငိုပွီးတောငျးပနျရှာပါတယျ။ ကိုမြိုးဝကေတော့ ဘာမှ မကွားလိုကျသလိုပါပဲ။ သူ့မကျြစိထဲမှာ သူ့သမီးပါးစပျလေး လှုပျနတောပဲ မွငျလိုကျရသလိုပဲ။ အခုလကျရှိ သူ့မကျြလုံးထဲမှာ ရှိနတောကတော့ အလှနျလှပပွီး၊ အဝတျအစားကငျးမဲ့နတေဲ့ဆုမွတျလေးဟာ အရှမှေ့ာ လှခငျြတိုငျးလှပွီး၊ သူစိတျကိုကွှစပွေီး မာနတေဲ့လီးကွီးက လိုးဖို့ အသငျ့အနထေား ရှိနတေော့တယျ။ ဆုမွတျကတော့ ခေါငျးလေးငုံ့ပွီး နပေါတယျ။ ကိုမြိုးဝတေယောကျ ဘယျလိုမှ စိတျမထိနျးနိုငျတော့ဘဲ သူ့ရဲ့ ရှပျအကငြ်္ီကိုခြှတျလိုကျပါတယျ။ နောကျတော့ ဘောငျးဘီကိုပါ ခြှတျခလြိုကျပါတော့တယျ။ ဘောငျးဘီအခြှတျမှာ ကွားလိုကျရတဲ့ ဇဈဖှငျ့သံကွောငျ့ဆုမွတျတယောကျ ခေါငျးငုံ့နရောကနေ မော့ကွညျ့လိုကျတော့သူ့ကိုအောကျခံဘောငျးဘီးလေးနဲ့ပဲမွငျလိုကျရပါတော့တယျ။အောကျဘောငျးဘီအောကျက လီးကွီးကိုပါမွငျလိုကျရတော့စိတျတှပွေနျထလာပွနျပါတယျ။ကိုမြိုးဝဟော ဒေါသတကွီးနဲ့။ “ငိုမနနေဲ့ အခုမှ၊ ဘာမှမထူးဘူး။ လူကွီးဖွဈပွီထငျနတေယျပေါ့ ဟုတျလား ပွောစမျး။
အေး ဒီလောကျတောငျ လူကွီဖွဈခငျြနတော လူကွီးလို ဆကျဆံပေးရမှာပေါ့..။တျောတျော လူကွီးဖွဈခငျြနတေယျပေါ´´ လို့ ဆကျပွောပွီး တငျပါးကို ရိုကျ ဖငျသားကွီးတှကေို ညှဈပေးလိုကျလုပျနသေေးသညျ။ အဲ့ဒီနောကျတော့ သူ့ရဲ့ ကနျြနတေဲ့ အဝတျအစားဖွဈတဲ့ အောကျခံ ဘောငျးဘီကို ခြှတျခလြိုကျပါတယျ။ ဆုမွတျတယောကျ မကျြလုံးအပွူးသား ဖွဈသှားရပါတယျ။ လီးကတျောတျောကွီး ကွီးနသေညျ။ နောကျတော့ ကိုမြိုးဝလေညျး ပေါငျကွားက အရညျတှရှေဲနပွေီဖွဈတဲ့ စောကျဖုတျလေးကို ပှတျသပျပေးနပေါတော့တယျ။လကျတဖကျက နို့လေးကို ကိုငျပွီးခပြေေးပွီး နောကျတဖကျနဲ့ စောကျစလေ့ေးကို ပှတျသပျပေးလိုကျပွီးတော့…ကွညျ့စမျးပါဦး အရညျတှလေညျး ရှဲနတောပဲ´´ဆိုပွီး ပွောပွောဆိုဆို တငျပါးကနမေပွီး သူ့ရဲ့ လီးကွီးကို တခကျြတညျး ထိုးသှငျးလိုကျပွီး အပြိုမှေးကိုပါ တပါတညျး ထိုးခှဲလိုကျပါတော့သညျ။ ဆုမွတျတယောကျမှာတာ့ နာကငျြလှနျးလို့ အသံကုနျအောငျ အျောလိုကျမိပါတော့တယျ။ သူ့ဦးလေးရဲ့ လီးကွီးဟာ သူ့စောကျဖုတျလေးထဲ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျနဲ့ ကောငျးကောငျးကွီး လိုးပေးနသေလို ဆုမွတျလညျး အလှနျနာကငျြနရေပါတယျ။
“ကဲ အပြိုဖွဈပွီလေ.. ဘယျလိုလဲ.. သမီးကိုလိုးပေးတာ ကောငျးတယျမဟုတျလား´´ စကားလညျး ပွော ဆောငျ့လညျးဆောငျ့နဲ့ လုပျနပေါတော့တယျ။ နံရံကို ကပျသထကျကပျအောငျ တှနျးကပျထားပွီး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနတေော့သညျ။ ဆောငျ့ခကျြတှကေ အရှိနျလညျး ပိုမွနျလာသညျ။ အရှိနျပိုမွနျလာတာနဲ့အမြှ ဆုမွတျရဲ့ စောကျဖုတျလေးဟာလညျး တဖွညျးဖွညျး ကယျြလာရပါတော့တယျ။ ဆုမွတျရဲ့ ငိုရှိုကျသံလေးတှကေ ကိုမြိုးဝရေဲ့ စိတျတှကေို ပိုပွီး ပွငျးထနျလာစပေါတယျ။ “ကောငျးလိုကျတဲ့ စောကျဖုတျလေး၊ လိုးလို့ ကောငျးလိုကျတာ.. အလိုးခံရတာ ကွိုကျနပွေီလား´´ လို့ ပွောပွီး စောကျစလေ့ေးကို ကလိလိုကျသေးသညျ။ဆုမွတျလညျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ နာကငျြတာတှအေစား ကာမအရသာတှေ တကျလာပါတော့တယျ။ နာကငျြမှုတှေ လြော့လာတာနဲ့အမြှ ကောငျးလာပွီး မညညျးမိအောငျ အောကျနှုတျခမျးကို ကိုကျထားလိုကျသညျ။ ကိုမြိုးဝတေယောကျ သူ့ရဲ့ ဆယျ့ရှဈနှဈသမီး တူမအပြိုစငျလေးကို လိုးနရေလို့ နတျပွညျရောကျနပွေီး နတျစညျးစိမျ ခံစားနရေသလို ဖွဈနပေါတယျ။
ဖငျကို ကိုငျပွီး အားရပါးရဆောငျ့ဆောငျ့ ပေးလိုကျတော့ ဆုမွတျလညျး ဘယျလိုမှ မထိနျးနိုငျတော့ဘဲနဲ့။“အငျး… အားလို့ ညညျးညူမိလိုကျသညျ။ဘယျလိုလဲ.. ကောငျးနပွေီမို့လားလို့မေးတော့ ဘာမှပွနျမဖွနေိုငျဘဲ ညညျးညူလို့ပဲ နမေိပါတော့သညျ။ အဲလို ညညျးညူသံတှေ ပိုကွားခငျြတဲ့ ကိုမြိုးဝဟော ဆုမွတျရဲ့ ဖငျကွီးကို ရိုကျရိုကျပွီး ဆောငျ့နပေါတယျ။ ပွီးတော့လညျး။ “မေးတာ ဖွလေေ..အလိုးခံရတာ ကွိုကျနပွေီမဟုတျလား။ လီးကွီးကို ဘယျလောကျကွိုကျလဲ ပွောစမျး´´လို့ မေးမေးပွီး ဖငျကွီးကိုလညျး တဖွနျးဖွနျးရိုကျနသေညျ။ နောကျတော့ ဆုမွတျတယောကျ ဖီးလျတကျလာပွီး နံရံကို လကျနဲ့ထောကျလို့ အနောကျကို တှနျးတှနျးပေးနတော ပါတော့တယျ။ဟုတျ ကောငျးပါတယျ ဦးရယျ..လီးကွီးကိုလညျးကွိုကျပါတယျ။ ဆောငျ့ဆောငျ့ဟု အျောလိုကျမိတော့သညျ။ပွီးခငျြနပွေီလား သမီး´´ မေးပွီး ဖငျကို ရိုကျလိုကျတော့ဟုတျ.. အရမျးကောငျးနပွေီ… သမီးပွီးတော့မယျ။ လိုးနတေဲ့ လီးကို ဆှဲထုတျပွီး ဆုမွတျကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ဖွဈအောငျ လှညျ့လိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ ခွထေောကျတခြောငျးကို ဆှဲမပွီး တခကျြတညျး ဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။
သမီး ပွီးတဲ့မကျြနှာလေးကို မွငျခငျြတယျ ပွောပွောဆိုဆိုသူ့သမီးလေးရဲ့ခြိုမွမွနှုတျခမျးတှကေို နမျးစုတျလိုကျသညျ။ ဆုမွတျလညျး ပထမပိုငျးတှငျ ရှကျရှံမိသျောလညျး နောကျတော့ အနမျးတှကေို ကကြေနြေပျနပျကွီး တုနျ့ပွနျလိုကျပါတော့သညျ။ ဆုမွတျစိတျထဲမှာ တခါမှ ဒီလောကျကောငျးကောငျး မနမျးဖူးဘူးလို့လညျး ထငျလိုကျမိသညျ။ကိုမြိုးဝဟော ဆုမွတျရဲ့ လြှာလေးကို စုပျပေးပွီး သူ့လြှာကိုလညျး ဆုမွတျပါးစပျထဲ ထိုးထညျ့လိုကျနဲ့ ကောငျးကောငျးကွီး နမျးနပေါတော့တယျ။ အဲ့ဒီ ပွငျးပွငျးပွပွ အနမျးတှကေ ဆုမွတျကို ပိုပွီး အရသာတှစေ့တောပေါ့။ပွီးလုပွီးခငျ ဖွဈလာတာနဲ့အမြှ ဆုမွတျတယောကျ ပေါငျတှလှေုပျ၊ ညညျးညူသံတှေ ပိုကယျြလာပါတော့တယျ။အား သမီးပွီးတော့မယျ.. ၊ အရမျးကောငျးတာပဲ၊ သမီးကို ပွီးအောငျ ဆောငျ့ပေးပါ။ “ကောငျးလိုကျတာ စောကျဖုတျလေးက.. သမီးပွီးတော့မှာလား.. ပွီးလိုကျလသေမီး ..ဦးလီးကွီးပျေါကို ပွီးလိုကျစမျးပါ…ဖငျကွီးကို ကိုငျကိုငျဆောငျ့ပွီး လိုးပွောလေးပွောနပေါတယျ။ ဆုမွတျလညျး နောကျဆုံးမှာတော့ အကောငျးကွီးကောငျးပွီးပွီးသှားပါတော့တယျ….။
အားပွီးပွီ.ဦးရယျ..အား..အားအဲ့ဒီနောကျမှာတော့ ကိုမြိုးဝလေညျး တခကျြနှဈခကျြလောကျ ဆောငျ့ပွီး ပွီးသှားပါတယျ။ဒီမှာ သမီးဖို့ လရညျတှလောပွီ.. အား အား.. ကောငျးလိုကျတာ လိုးရတာဝငျလာတဲ့ လရညျတှဟော မြားလှနျးလို့ လြှံထှကျပွီး ဖငျဝကွားအထိ စီးဆငျးသှားပါတော့တယျ..။ လီးကွီးကို မထုတျသေးဘဲ စောကျဖုတျထဲမှာ စိမျထားပွီး အနမျးလေးစပေးလိုကျတော့ လိုလိုလားလား ပွနျပွီးတုနျ့ပွနျလာသညျ။ ဆုမွတျလညျး မကျြရညျတှဝေဲနသေေးတဲ့ မကျြဝနျးအစုံနဲ့မော့ကွညျ့လိုကျပါတယျ။သမီးကို နာအောငျလုပျမိတာ ခှငျ့လှတျပါသမီးရယျ.။ ဦးလေ ဘယျလိုမှ စိတျမထိနျးနိုငျ…။ စကားက တဝကျတပကျြမှာရပျသှားပွီး လှပတဲ့နှုတျခမျးလေးနဲ့ စုပျနမျးတာခံလိုကျရသညျ။ လြှာနှဈခုဟာ အခငျြးခငျြး ကလူကြီစယျနသေလိုပါပဲ။
နောကျတော့ ဆုမွတျတကိုယျလုံးကို ပှတျသပျပေးလိုကျ၊ အနမျးတှေ မပွတျတနျးနနျးလိုကျနဲ့ ခဈြရညျလူးနကွေတော့သညျ။ ခဏအကွာမှာတော့ စောကျဖုတျထဲမှာ စိမျထားတဲ့ လီးကွီးက ပွနျတောငျလာပါတော့တယျ။ ဆုမွတျတယောကျ နမျးနတောကို ရပျလိုကျပွီး မကျြလုံးအပွူးသားနဲ့ သူ့အဖကေို မော့ကွညျ့လိုကျမိတော့သညျ။ လိုးလို့ ကောငျးလိုကျတာ သမီးရယျ၊ သမီးစောကျဖုတျလေးက ဦးလိုးဖူးသမြှ အကပျြဆုံးပဲ၊ ဦးကို အမွဲတမျး ပေးလိုးနျောအငျးပါ ဦး စိတျကွိုကျပါ။ သမီး ဒျေါလေးတို့ဆီမှာ မနတေော့ဘူးလေ..။ ဒီကိုပွနျပွောငျးလာခဲ့မယျ။ ဦးနဲ့ပဲ နတေော့မယျနျောဒါပမေယျ့ ရညျးစားလို၊ မိနျးမလို နရေမယျ..။ဘယျလိုလဲသဘောတူလားသဘောတူတယျပွောရငျ အခုထပျလိုးဦးမှာလားဟငျလို့ ခဈြစရာအပွုံးလေးနဲ့ ပွနျဖွလေိုကျပါတော့သညျ …. ပွီးပါပွီ။
ဒီနေ့အိမ်အပြန်လမ်းဟာ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တယ်။ ဒီနေ့ အလုပ်ကနေ လူလျော့ထဲအထဲ ပါသွားတယ်။ ဘယ်လောက် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလဲ။ဒါနဲ့ ခပ်စောစောပဲပြန်လာခဲ့ရတယ်။ နောက်တစ်ခု စိတ်ဖိစီးတာကလည်း ဒီရက်ပိုင်းမှ အဒေါ်တွေနဲ့ အတူနေရာက ပြန်လာတဲ့ သူတူမ ဆုမြတ်ကြောင့်ပါ။ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတာ မဟုတ်ပေမယ့် တူမလေးကို လွတ်လပ်ခွင့် တအားမပေးထားဘူး။ သမီးအရင်းလို့ချစ်တာကြောင့် သမီးလို့ပဲခေါ်ပြီး ယုယကျင်နာမှုတွေပေးသမျှ စောဒက တက်တာကို အမြဲတမ်းခံနေရတယ်။သမီးက ဒါလေးတောင် မလုပ်ရဘူးလားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားတာ အပြစ်လားစသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒီနေ့တော့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေဆီ ဖုန်းဆက်လို့ရရင် အပြင်ထွက် အရက်သောက်မယ်။ မရရင်တော့ အိမ်မှာပဲ သောက်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတာ။ အိမ်ရောက်လို့ သော့ဖွင့်ပြီး အိမ်ထဲဝင် လိုက်တော့ ဘယ်လိုမှထင်မှတ်မထားတဲ့ မြင်ကွင်းက ဆီးကြို နေပါတယ်။ တူမဖြစ်သူဟာ အပြာကားကိုကြည့်ပြီး ၀တ်လစ်စလစ်နဲ့ ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေတာကြောင့်ပါ။
သူ့မရဲ့ ကားထားတဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားမှာတော့ လိင်တံအတုကိုထည့်ပြီး အားပါးတရ မွှေနေတာကို တွေ့လိုက်ရတော့သည်။ဆုမြတ်ဟာ မျက်စိနှစ်လုံးကို ပိတ်ထားပြီး ဖီးလ်တွေတက်နေပါတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း။ “အား..အား´´ ဆိုပြီး ညည်းပြောလေး ပြောနေပါသေးတယ်။ကိုမျိုးဝေတယောက် သူတူမလေးဟာ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရလဲ ဆိုတာကို အံသြနေမိပါတော့သည်။ ဆုမြတ်လေးဟာ တချိန်တည်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ကျောကို ဆိုဖာပေါ်မှီချပြီး တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို ကော့ကော့ပေးနေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့နို့လေးတွေကို သူလက်နဲ့ ပွတ်သပ်နေတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ “အား….ကောင်းလိုက်တာ…´လို့ပြောပြီး သူ့မျက်လုံးကိုအဖွင့်မှာတော့ ဒေါသတကြီးနဲ့ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ သူ့ကို မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ ဆုမြတ်တယောက် ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားပြီး သူ့ရဲ့ရင်သားလေးတွေကို လက်ကလေးနဲ့ အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖီးလ်တက်နေခြင်းနဲ့အတူ ရှက်ရွံ့ဝမ်းနည်းခြင်းကို တပြိုင်တည်း ခံစားနေရတဲ့ပုံပါပဲ။ ကြည့်နေတဲ့ သူကို ကြည့်ရင်း ဆုမြတ်တယောက် ငိုချလိုက်မိပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်လာတဲ့လိင်စိတ်ကထိန်းမရနိုင်တော့ဘဲနဲ့ ပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်လာပါပြီ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဦးလေးတယောက်လုံး ကြည့်နေပေမယ့်ဆုမြတ်တယောက်အကောင်းကြီးကောင်းပြီး တညည်းတညူဖြစ်နေပါတယ်။ ဆုမြတ်ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိတော့ပါ။ ပြီးလုပြီးခင်အနေအထားမှာ မပြီးလိုက်တာရော..ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိတာရောပေါင်းပြီးငူငူကြီးသာထိုင်နေမိတော့သည်။ နောက်တော့မှာ သူ့အိပ်ခန်းထဲကို အပြေးကလေးထွက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအခန်းထဲကို မရောက်လိုက်ပါ…။ သူ့အဖေက လက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီး ပြန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ “ဟင်..ငါသမီး တော်တော်အလိုးခံချင်နေတယ် ဟုတ်လား..ဒီစကားတွေ ဘယ်ကနေဘယ်လို ထွက်သွားလည်း ကိုမျိုးဝေ မသိလိုက်ပါ။ ပြောထွက်မိတာကိုလည်း အံ့သြနေမိတယ်။ ဆုမြတ်တယောက် တော်တော်လေး အံ့အားသင့်သွားရပါတယ်။အမြဲတမ်း ငြင်ငြင်သာသာ ပြောတတ်တဲ့၊ သူ့ကို အလွန်ကြင်နာတဲ့ သူ့ဦးလေး ပါးစပ်က အဲလို စကားမျိုး ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ ထင်မထားခဲ့မိပါဘူး။ သူ သတိဝင်လာပြီးသမီးတောင်းပန်ပါတယ် ဦးရဲ့။
အခုလည်း ဘယ်ကနေဘယ်လို ဖြစ်သွားမှန်း မသိလိုက်တာပါလို့ ငိုပြီးတောင်းပန်ရှာပါတယ်။ ကိုမျိုးဝေကတော့ ဘာမှ မကြားလိုက်သလိုပါပဲ။ သူ့မျက်စိထဲမှာ သူ့သမီးပါးစပ်လေး လှုပ်နေတာပဲ မြင်လိုက်ရသလိုပဲ။ အခုလက်ရှိ သူ့မျက်လုံးထဲမှာ ရှိနေတာကတော့ အလွန်လှပပြီး၊ အ၀တ်အစားကင်းမဲ့နေတဲ့ဆုမြတ်လေးဟာ အရှေ့မှာ လှချင်တိုင်းလှပြီး၊ သူစိတ်ကိုကြွစေပြီး မာနေတဲ့လီးကြီးက လိုးဖို့ အသင့်အနေထား ရှိနေတော့တယ်။ ဆုမြတ်ကတော့ ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး နေပါတယ်။ ကိုမျိုးဝေတယောက် ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူ့ရဲ့ ရှပ်အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ဘောင်းဘီကိုပါ ချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ဘောင်းဘီအချွတ်မှာ ကြားလိုက်ရတဲ့ ဇစ်ဖွင့်သံကြောင့်ဆုမြတ်တယောက် ခေါင်းငုံ့နေရာကနေ မော့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုအောက်ခံဘောင်းဘီးလေးနဲ့ပဲမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။အောက်ဘောင်းဘီအောက်က လီးကြီးကိုပါမြင်လိုက်ရတော့စိတ်တွေပြန်ထလာပြန်ပါတယ်။ကိုမျိုးဝေဟာ ဒေါသတကြီးနဲ့။ “ငိုမနေနဲ့ အခုမှ၊ ဘာမှမထူးဘူး။ လူကြီးဖြစ်ပြီထင်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား ပြောစမ်း။
အေး ဒီလောက်တောင် လူကြီဖြစ်ချင်နေတာ လူကြီးလို ဆက်ဆံပေးရမှာပေါ့..။တော်တော် လူကြီးဖြစ်ချင်နေတယ်ပေါ´´ လို့ ဆက်ပြောပြီး တင်ပါးကို ရိုက် ဖင်သားကြီးတွေကို ညှစ်ပေးလိုက်လုပ်နေသေးသည်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ သူ့ရဲ့ ကျန်နေတဲ့ အ၀တ်အစားဖြစ်တဲ့ အောက်ခံ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဆုမြတ်တယောက် မျက်လုံးအပြူးသား ဖြစ်သွားရပါတယ်။ လီးကတော်တော်ကြီး ကြီးနေသည်။ နောက်တော့ ကိုမျိုးဝေလည်း ပေါင်ကြားက အရည်တွေရွှဲနေပြီဖြစ်တဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်ပေးနေပါတော့တယ်။လက်တဖက်က နို့လေးကို ကိုင်ပြီးချေပေးပြီး နောက်တဖက်နဲ့ စောက်စေ့လေးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့…ကြည့်စမ်းပါဦး အရည်တွေလည်း ရွှဲနေတာပဲ´´ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆို တင်ပါးကနေမပြီး သူ့ရဲ့ လီးကြီးကို တချက်တည်း ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး အပျိုမှေးကိုပါ တပါတည်း ထိုးခွဲလိုက်ပါတော့သည်။ ဆုမြတ်တယောက်မှာတာ့ နာကျင်လွန်းလို့ အသံကုန်အောင် အော်လိုက်မိပါတော့တယ်။ သူ့ဦးလေးရဲ့ လီးကြီးဟာ သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ ကောင်းကောင်းကြီး လိုးပေးနေသလို ဆုမြတ်လည်း အလွန်နာကျင်နေရပါတယ်။
“ကဲ အပျိုဖြစ်ပြီလေ.. ဘယ်လိုလဲ.. သမီးကိုလိုးပေးတာ ကောင်းတယ်မဟုတ်လား´´ စကားလည်း ပြော ဆောင့်လည်းဆောင့်နဲ့ လုပ်နေပါတော့တယ်။ နံရံကို ကပ်သထက်ကပ်အောင် တွန်းကပ်ထားပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတော့သည်။ ဆောင့်ချက်တွေက အရှိန်လည်း ပိုမြန်လာသည်။ အရှိန်ပိုမြန်လာတာနဲ့အမျှ ဆုမြတ်ရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း ကျယ်လာရပါတော့တယ်။ ဆုမြတ်ရဲ့ ငိုရှိုက်သံလေးတွေက ကိုမျိုးဝေရဲ့ စိတ်တွေကို ပိုပြီး ပြင်းထန်လာစေပါတယ်။ “ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်လေး၊ လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ.. အလိုးခံရတာ ကြိုက်နေပြီလား´´ လို့ ပြောပြီး စောက်စေ့လေးကို ကလိလိုက်သေးသည်။ဆုမြတ်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာကျင်တာတွေအစား ကာမအရသာတွေ တက်လာပါတော့တယ်။ နာကျင်မှုတွေ လျော့လာတာနဲ့အမျှ ကောင်းလာပြီး မညည်းမိအောင် အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားလိုက်သည်။ ကိုမျိုးဝေတယောက် သူ့ရဲ့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်သမီး တူမအပျိုစင်လေးကို လိုးနေရလို့ နတ်ပြည်ရောက်နေပြီး နတ်စည်းစိမ် ခံစားနေရသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဖင်ကို ကိုင်ပြီး အားရပါးရဆောင့်ဆောင့် ပေးလိုက်တော့ ဆုမြတ်လည်း ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့။“အင်း… အားလို့ ညည်းညူမိလိုက်သည်။ဘယ်လိုလဲ.. ကောင်းနေပြီမို့လားလို့မေးတော့ ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်ဘဲ ညည်းညူလို့ပဲ နေမိပါတော့သည်။ အဲလို ညည်းညူသံတွေ ပိုကြားချင်တဲ့ ကိုမျိုးဝေဟာ ဆုမြတ်ရဲ့ ဖင်ကြီးကို ရိုက်ရိုက်ပြီး ဆောင့်နေပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း။ “မေးတာ ဖြေလေ..အလိုးခံရတာ ကြိုက်နေပြီမဟုတ်လား။ လီးကြီးကို ဘယ်လောက်ကြိုက်လဲ ပြောစမ်း´´လို့ မေးမေးပြီး ဖင်ကြီးကိုလည်း တဖြန်းဖြန်းရိုက်နေသည်။ နောက်တော့ ဆုမြတ်တယောက် ဖီးလ်တက်လာပြီး နံရံကို လက်နဲ့ထောက်လို့ အနောက်ကို တွန်းတွန်းပေးနေတာ ပါတော့တယ်။ဟုတ် ကောင်းပါတယ် ဦးရယ်..လီးကြီးကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။ ဆောင့်ဆောင့်ဟု အော်လိုက်မိတော့သည်။ပြီးချင်နေပြီလား သမီး´´ မေးပြီး ဖင်ကို ရိုက်လိုက်တော့ဟုတ်.. အရမ်းကောင်းနေပြီ… သမီးပြီးတော့မယ်။ လိုးနေတဲ့ လီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ဆုမြတ်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်အောင် လှည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခြေထောက်တချောင်းကို ဆွဲမပြီး တချက်တည်း ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။
သမီး ပြီးတဲ့မျက်နှာလေးကို မြင်ချင်တယ် ပြောပြောဆိုဆိုသူ့သမီးလေးရဲ့ချိုမြမြနှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းစုတ်လိုက်သည်။ ဆုမြတ်လည်း ပထမပိုင်းတွင် ရှက်ရွံမိသော်လည်း နောက်တော့ အနမ်းတွေကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး တုန့်ပြန်လိုက်ပါတော့သည်။ ဆုမြတ်စိတ်ထဲမှာ တခါမှ ဒီလောက်ကောင်းကောင်း မနမ်းဖူးဘူးလို့လည်း ထင်လိုက်မိသည်။ကိုမျိုးဝေဟာ ဆုမြတ်ရဲ့ လျှာလေးကို စုပ်ပေးပြီး သူ့လျှာကိုလည်း ဆုမြတ်ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်နဲ့ ကောင်းကောင်းကြီး နမ်းနေပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီ ပြင်းပြင်းပြပြ အနမ်းတွေက ဆုမြတ်ကို ပိုပြီး အရသာတွေ့စေတာပေါ့။ပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ ဆုမြတ်တယောက် ပေါင်တွေလှုပ်၊ ညည်းညူသံတွေ ပိုကျယ်လာပါတော့တယ်။အား သမီးပြီးတော့မယ်.. ၊ အရမ်းကောင်းတာပဲ၊ သမီးကို ပြီးအောင် ဆောင့်ပေးပါ။ “ကောင်းလိုက်တာ စောက်ဖုတ်လေးက.. သမီးပြီးတော့မှာလား.. ပြီးလိုက်လေသမီး ..ဦးလီးကြီးပေါ်ကို ပြီးလိုက်စမ်းပါ…ဖင်ကြီးကို ကိုင်ကိုင်ဆောင့်ပြီး လိုးပြောလေးပြောနေပါတယ်။ ဆုမြတ်လည်း နောက်ဆုံးမှာတော့ အကောင်းကြီးကောင်းပြီးပြီးသွားပါတော့တယ်….။
အားပြီးပြီ.ဦးရယ်..အား..အားအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကိုမျိုးဝေလည်း တချက်နှစ်ချက်လောက် ဆောင့်ပြီး ပြီးသွားပါတယ်။ဒီမှာ သမီးဖို့ လရည်တွေလာပြီ.. အား အား.. ကောင်းလိုက်တာ လိုးရတာဝင်လာတဲ့ လရည်တွေဟာ များလွန်းလို့ လျှံထွက်ပြီး ဖင်ဝကြားအထိ စီးဆင်းသွားပါတော့တယ်..။ လီးကြီးကို မထုတ်သေးဘဲ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ စိမ်ထားပြီး အနမ်းလေးစပေးလိုက်တော့ လိုလိုလားလား ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်လာသည်။ ဆုမြတ်လည်း မျက်ရည်တွေဝဲနေသေးတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံနဲ့မော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သမီးကို နာအောင်လုပ်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါသမီးရယ်.။ ဦးလေ ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်…။ စကားက တ၀က်တပျက်မှာရပ်သွားပြီး လှပတဲ့နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ စုပ်နမ်းတာခံလိုက်ရသည်။ လျှာနှစ်ခုဟာ အချင်းချင်း ကလူကျီစယ်နေသလိုပါပဲ။
နောက်တော့ ဆုမြတ်တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်၊ အနမ်းတွေ မပြတ်တန်းနန်းလိုက်နဲ့ ချစ်ရည်လူးနေကြတော့သည်။ ခဏအကြာမှာတော့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ စိမ်ထားတဲ့ လီးကြီးက ပြန်တောင်လာပါတော့တယ်။ ဆုမြတ်တယောက် နမ်းနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ သူ့အဖေကို မော့ကြည့်လိုက်မိတော့သည်။ လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ်၊ သမီးစောက်ဖုတ်လေးက ဦးလိုးဖူးသမျှ အကျပ်ဆုံးပဲ၊ ဦးကို အမြဲတမ်း ပေးလိုးနော်အင်းပါ ဦး စိတ်ကြိုက်ပါ။ သမီး ဒေါ်လေးတို့ဆီမှာ မနေတော့ဘူးလေ..။ ဒီကိုပြန်ပြောင်းလာခဲ့မယ်။ ဦးနဲ့ပဲ နေတော့မယ်နော်ဒါပေမယ့် ရည်းစားလို၊ မိန်းမလို နေရမယ်..။ဘယ်လိုလဲသဘောတူလားသဘောတူတယ်ပြောရင် အခုထပ်လိုးဦးမှာလားဟင်လို့ ချစ်စရာအပြုံးလေးနဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတော့သည် …. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အရမျးကောငျးနပွေီ